41 “Ị̀ ga-ejili nko azụ̀ dọpụta Agụ Iyi,*+Ka ị̀ ga-ejili ụdọ keda ire ya? 2 Ị̀ ga-etinyeli ụdọ ahịhịa amị n’oghere imi ya,+Ka ị̀ pụrụ iji ogwu dụpuo agba ya? 3 Ọ̀ ga-arịọsi gị arịrịọ ike,Ka ọ̀ ga-agwa gị okwu dị nro? 4 Gị na ya ùnu ga-agba ndụ,Ka i wee jiri ya mere ohu ruo mgbe a na-akaghị aka? 5 Ị̀ ga-egwusa ya egwu dị ka ọ̀ bụ nnụnụ,Ka ị̀ ga-ekenye ya eriri ka ụmụ agbọghọ gị were ya gwurie egwu? 6 Ndị ahịa hà ga-eji ihe gbanwere ya?Hà ga-ekesara ya ndị ahịa? 7 Ị̀ pụrụ ịmaju ya ube n’ahụ́,+Ma ọ bụ majuo ube e ji egbu azụ̀ n’isi ya? 8 Tụkwasị ya aka gị.Cheta otú o si ebu agha. Emela ya ọzọ. 9 Lee! Ihe mmadụ na-atụ anya ya n’ebe ọ nọ ga-akụ afọ n’ala.Anya nkịtị mmadụ hụrụ ya ga-akwada onye ahụ. 10 Ọ dịghị onye obi kara nke na ọ ga-aga kpasuo ya.Ọ̀ bụkwa onye pụrụ iguzo n’ihu m?+ 11 Ònye buru ụzọ nye m ihe, nke na m kwesịrị ịkwụ ya ụgwọ?+Ihe niile dị n’okpuru eluigwe dum bụ nke m.+ 12 M gaghị ahapụ ịkọ banyere akụkụ ahụ́ ya dị iche icheMa ọ bụ banyere ịdị ike ya na otú ọdịdị ahụ́ ya si maa mma. 13 Ònye yipụtụworo ya uwe?Ònye ga-abanye ya n’ọnụ? 14 Ònye meghetụworo ọnụ ya nke yiri ọnụ ụzọ?Ezé ya niile na-emenye ụjọ. 15 Ihe na-ebu ya isi bụ akpịrịkpa ya ndị nọ n’ahịrị n’ahịrị,Bụ́ ndị rapagidere n’ahụ́ ibe ha dị ka è ji mgbá siri ike nyagide ha. 16 Otu na-arapagidesi ike n’ahụ́ ibe ya,Ọbụna ikuku apụghịkwa isi n’etiti ha gafere. 17 Nke ọ bụla na-arapagidesi ike n’ahụ́ ibe ya;Ha na-arapara n’ahụ́ ibe ha, a pụghịkwa ikewa ha. 18 Uzere ya na-enwupụta ìhè,Anya ya dịkwa ka ìhè chi ọbụbọ. 19 Àmụ̀mà na-esi ya n’ọnụ apụta,Ọbụna ọkụ na-esikwa na ya apụta. 20 Anwụrụ ọkụ na-esi n’oghere imi ya apụta,Dị ka ekwú ọkụ e ji ahịhịa amị menye ọkụ na ya. 21 Ume ọ na-eku na-eme ka icheku ọkụ nwuru ọkụ,Ọbụna ire ọkụ na-esikwa ya n’ọnụ apụta. 22 Ike dị n’olu ya,Obi na-ekoropụ onye guzo n’ihu ya. 23 Akpụkpọ ahụ́ nke dị n’okpuru afọ ya siri ike;O yiri ihe a wụrụ awụ n’ahụ́ ya, a gaghị ewepụ ha ewepụ. 24 A wụsiri obi ya ike dị ka nkume,Ee, nkume a wụsiri ike dị ka nne nkume igwe nri. 25 O bilie ọtọ, ụjọ na-ejide ndị dị ike;+Ụjọ na-etinye ha ná mgbagwoju anya. 26 Ọ bụrụ na e jiri mma agha bịakwasị ya, o nweghị ebe mma agha ga-eru ya,Ube na akụ́ na isi akụ́ enweghịkwa ebe ha ga-eru ya.+ 27 Ígwè+ na-adị ya ka okporo ọka efu,Ọla kọpa na-adịkwa ya ka osisi rere ure. 28 Akụ́ adịghị achụ ya ọsọ;Nkume èbè+ na-adịkwa ya ka ahịhịa ọka efu. 29 Okpiri na-adị ya ka ahịhịa ọka efu,+Ọ na-achịkwa mkpọtụ árọ̀ na-eme ọchị. 30 Okpuru afọ ya dị ka ibe eju pịchara ọnụ;Ọ na-agbasa ihe e ji etichapụta mkpụrụ+ n’elu apịtị. 31 Ọ na-eme ka ala ala osimiri na-agbọ agbọ dị ka ite;Ọ na-eme ka oké osimiri dị ka ite a gbanyere mmanụ otite. 32 Ọ na-eme ka ụzọ o si gafere na-enwu zaa;Mmadụ echee na ogbu mmiri bụ isi awọ́. 33 E nweghị ihe yiri ya n’elu ala,Ihe na-adịghị atụ ihe ọ bụla egwu. 34 Ọ na-ahụ ihe ọ bụla nke dị elu.Ọ bụkwa eze anụ ọhịa niile dị ebube.”
^ N’asụsụ Hibru, ‘Levayatan.’